GuestReady - Ukuphefumula Kwenjabulo - I-Airbnb
GuestReady - Ukuphefumula Kwenjabulo
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Fredrik
Ikhaya lethu lisendaweni esanda kwakhiwa i-LIV Residence, ibanga lokuya ogwini, izitolo nezindawo zokudlela e-JBR, eDubai Marina metro station & tram station.
Ekhaya lethu, impilo nokuphepha kwakho kuza kuqala. Silandela iphrothokholi yokuhlanza ethuthukisiwe, enokuhlanza okuchwepheshile nokubulala amagciwane ngamasu.
Igumbi lethu lokuphumula negumbi lokulala linamafasitela asuka phansi kuye ophahleni. Isitayela esicatshangelwe kahle ukunikeza ukukhanya kwelanga kwemvelo kanye nemibono emangalisayo ye-Dubai Marina. Igumbi lokuhlala lifakwe indawo yokuhlala eshintshwayo ibe umbhede osofa ababili, i-Samsung 55 amayintshi yesikrini esiyisicaba se-Smart TV kanye nesipikha esingangeni manzi se-JBL ukuze wonke umuntu ahlehle futhi aphumule! Kukhona nendawo yokudlela yaba-4 kanye nezihlalo zebha zaba-3 ekhishini. Ikhishi lihlome ngokugcwele ngakho konke okudingayo ukuze wenze ukudla okunenhliziyo enhle.
Igumbi lokulala linombhede olingana nenkosi yase-Jysk wezwekazi eliphambili ophahlwe ngamashidi ekhwalithi yehhotela namalineni ukuze uphumule kahle ebusuku.
Siphinde sihlinzeke ngamathawula nezinto zokugeza zamahhala. Zizwe ukhululekile ukusebenzisa ezinye izinsiza ekhaya, okuhlanganisa umshini wokuwasha nezinsiza zoku-ayina.
Sithemba ukuthi ube nokuhlala okumnandi!
Ibhilidi lamafulethi lisendaweni ekahle yabahambi bebhizinisi, imindeni nabavakashile. Ngase-Marina Promenade, ungathola izinto eziningi ongazenza endaweni ngokwayo. Ingenye yezindawo ezilungele abahamba ngezinyawo eDubai. Iphinde ibe nendawo ehamba emanzini ebizwa nge-Dubai Marina Walk edume ngokuhamba, ukuhambahamba, ukugijima nokugijima. I-Dubai Marina walk, isigamu sehora ngomzuzu wokuhamba, okuhamba ngasohlangothini lwamanzi kunezindawo zokudlela ezikhethiwe ezihlala abantu abaningi ngenkathi isihlahla sesundu esikleliswe nge-boardwalk sisebenza njengesixhumanisi phakathi kwemibhoshongo eminingi ekuthuthukisweni, izingadi kanye ne-marina. Ungaphinda udlule enxanxatheleni yezitolo yaseDubai Marina, imizuzu engama-22 kuphela ngezinyawo, ukuze uthole igilosa nokuthenga ukhululekile. I-Marina Beach ne-Skydive Dubai zonke ziseduze. Kukhona nezindawo zokudlela eziningi phakathi nohambo lwemizuzu eyi-10 ukusuka ekhaya.
Ikhaya lami lisezandleni ze-GuestReady, iqembu labaphathi bezindlu elisebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi ukuhlala kwakho kuyashelela futhi kunethezekile! Zizotholakala 24/7 uma unanoma yimiphi imibuzo noma izicelo ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Ikhaya lami lisezandleni ze-GuestReady, iqembu labaphathi bezindlu elisebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi ukuhlala kwakho kuyashelela futhi kunethezekile! Zizotholakala 24/7 uma u…